Jane Austen. Mitsara nezvidimbu zvebasa rake pazuva rake rekuzvarwa 244 | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Mabhuku, Romance novel
Mufananidzo waOzias Humphry.
Jane Austen anotendeuka makumi maviri nemana nhasi uye zvinogara zvakanaka kumukorokotedza. Zvinogoneka kuti, mumazuva ano yemweya yakanaka uye yekudanana pakakwirira kwavo, ngatitorei bhuku rake kana kuti regai tione zvimwe zvemafirimu ake. Zvakaoma kuneta neako dzisingaperi nyaya dzerudo. Nhasi ndinomuyeuka pamwe mamwe mitsara nezvidimbu yemabasa ake akatanhamara.
2 Mutsara kusarudzwa
Iye akaberekerwa muSteventon uye anofungidzirwa mumwe wevanyori vane mukurumbira mukati meAnglo-Saxon zvinyorwa, asiwo zvepasirese mune yayo kunyanya kudanana mhando.
Akatanga kunyora achiri mudiki, asi rake rekutanga basa rakabudiswa raive Sense uye Kunzwisisa, iyo yaakatove nayo zita mune yekunyora nyika. Makore maviri gare gare zvakatevera Kuzvikudza uye Kusarura, iyo yakamupa kubudirira kukuru uye anogona yake inozivikanwa inozivikanwa.
ari novelas naAusten, zvakare netoni yechinyakare, vaive inozivikanwa zvikuru kare munguva yayo. Ivo zvakare vakapesvedzera zvizvarwa zvinotevera zve kwete chete vanyori veChirungu. Mazita ake achangoburwa, Kukwezva y Northanger Abbey, dzakabudiswa mushure mekufa.
Mufaro muwanano unoenderana zvachose nemhanza.
Ndave ndiri munhu ane hudyire hupenyu hwangu hwese, kwete mukufunga, asi mukuita.
Hupenyu hunokosha zvakadii kana tisiri pamwe chete?
Hunhu hwangu huchava, mushure memamwe matambudziko, zvese zvavanoda.
Zvakaitika zvakanaka mumurume.
Kunaka hakuwanzo kutungamira kumagumo akanaka. Icho ichokwadi chinozivikanwa nevose.
Hapana munhu anotsutsumwa nezvekuva nezvisina kukodzera.
Kana paine hunyanzvi hwehunhu hwedu hunogona kutariswa hunoshamisa, ndangariro.
Zvinogara zvisinganzwisisike kuti murume aone kuti mukadzi anoramba sei kuroorwa.
Ini handidi kuti vanhu vave vakanaka, saka zvinondiponesa padambudziko rekuvada.
Marianne akatanga kuona kuti kushaya tariro kwake kwegumi nematanhatu nezvekutsvaga murume kuti azadzise pfungwa dzake dzehurume kukwana kwaive kwakareruka uye kusina hwaro.Willoughby zvino akamupa zvakaringana nezvaaifungidzira mune dzimwe nguva dzekutarisira, sekukwanisa kumutsa maari rudo rwechokwadi; uye maitiro ake akazivisa kukomba mune zvishuwo zvake uye chokwadi muzvipo zvake.
Emma Woodhouse, akanaka, akangwara uye akapfuma, aine mhuri yakapfuma uye hunhu hwakanaka, airatidzika kuunganidza mumunhu wake zvipo zvakanakisa zvekuvapo; uye aive ararama makore angangoita makumi maviri nerimwe asina kana chekumutambudza kana kumutsamwisa. Aive wekupedzisira pavasikana vaviri ve baba vane rudo uye vanogutsa baba uye, semhedzisiro yemuchato wehanzvadzi yavo, anga ari amai vemba kubva achiri mudiki kwazvo. Amai vake vaive vafa kwenguva yakareba kuti iye achengete zvinopfuura ndangariro dzakashata dzeavo vaimubata, uye governess, mukadzi ane moyo muhombe, akange atora nzvimbo yake anenge amai.
Apo VaDarcy pavakaendesa tsamba iyi kwaari, Erizabheti haana kutarisira kuti Erizabheti achavandudza zvaari kupihwa, asi kana iye haana kutarisirawo, kure nazvo, zvemukati. Zviri nyore kufungidzira nekufunganya kwaakaverenga zvaakataura uye nekumwe kupesana manzwiro aakasimudza mubhokisi rake. Manzwiro ake aisakwanisa kutsanangurwa zvakajeka achiverenga. Akatanga kuona nekushamisika kuti Darcy achiri kuwana zvikonzero zvehunhu hwake, paakagutsikana zvakasimba kuti aisakwanisa kuwana chero tsananguro yekuti kungofunga kwekushongedza kwaisazomumanikidza kuvanda.
Kuwedzera kwehukama pakati paCatherine naIsabella kwaive nekukurumidza sekutanga kwadzo kwaive kushanda, uye madhivhosi ese erudo rwakakurumidza kukundwa zvekuti pasina nguva pakange pasisina humwe humbowo hwekumupa kushamwari dzake kana kune mumwe nemumwe. Vakadana mumwe nemumwe zita ravo rekutanga, vaigara vachifamba vakabatana maoko, vakabatana neboka rimwechete rekutamba uye havana kuzvibvumidza kuti vapatsanurwe; kana mangwanani akanaya achivatorera zvimwe zvinotsausa, vakaramba vakatsunga kuonana, vachishingirira mwando nematope, uye vachizvivharira pamwe chete kuti vaverenge zvinyorwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Vanyori » Jane Austen. Mitsara nezvidimbu zvebasa rake pazuva rake rekuzvarwa makumi maviri nemana